Ukulawulwa Kwezilumulayo Nezikhulayo
Lesi sigaba sibheka ukunakekelwa kwezingulube ezinomsoco kanye nezingulube ezikhulile.
Ngokuvamile, abalimi abasha bezingulube abaqapheli ukuthi lezi piglets zanamuhla ezifuywayo ngokwemvelo zinezinsuku ezingaba ngu-10 ukuthuthukisa ukuguqulwa komzimba nokwakhiwa kwesilinganiso senyama nesithambo esenza sikwazi ukukhula kusuka kwesisindo sokuzalwa esingu-1 kuya ku-1.5 kg ukuya isisindo sokuxosha 90 kg noma ngaphezulu ezinyangeni eziyisithupha nje.
Lokhu kungaphansi kwezimo ezifanele zokudla, izinga lokushisa, umoya wokuphuza umoya, ukuhlanzeka, induduzo, ukuvimbela izifo kanye nokwelapha, ukulawulwa kwezinambuzane nokugcina impahla.
'Ukuthengwa' kubhekisela emandleni omnikazi ukuba azi ukuthi imilayezo ithunyelwa ngani, ngokuqondene nabo, kubanakekeli babo ngaso sonke isikhathi. Lezi zizoba izinto, imisindo, iphunga, izinga lokushisa nomoya, ukulahlwa kokudla, ukwehluleka ukukhula, ukuhlaselwa phansi nokufa ngokweqile. Uhlu luyisikhathi eside kanti umuntu oyisisindo-umuntu ozobhekana naye uzophendula noma afune usizo.
Ukuqinisekisa ukukhiqizwa okungcono, inyanga yokuqala emva kokugcoba izingulube kubalulekile futhi kufanele uqaphele.
Ngisho nasekukhuliseni kwemaviki ayisithupha, i-piglet iyalahlwa izinzuzo zokududuza umndeni ngesikhathi esingaphansi kokuqala kunesikhathi sokuncotshwa ngokuhlwanyela.
Isizathu sokugaya 'ekuqaleni' ukunikeza ukuhlwanyela isikhathi sokubuyisela ngaphambi kokumbuyisela emuva emathunjini, okuzokwenza kalula. Ukuhlwanyela kulindeleke ukuthi kukhiqizwe okungenani amalitha amabili ngonyaka, kodwa ngokuvamile kuzodinga okungenani umjikelezo owodwa wamaviki amathathu ukuze uphinde uthole isimo.
Iminyaka yokugaya ayibekeli kahle futhi kunenzuzo ethile 'ekuhlungeni ukuhlukana'. Lokhu kusho ukuthatha abanye abancancisayo abakhulu kunenNezimhumula ngesonto masinyane kunezinye. Ngenxa yokuncintisana okuncane, izingulube ezincane manje zithola ithuba lokukhulisa ubisi babo.
Inqubo yokugoma icindezela izingulube ngezindlela eziningi:
Ama-pigs anqatshelwe ukuthengiswa okucebile nokucebile okuhlwanyela ubisi, okutholakala ngezikhathi ezithile ngehora lapho umhlwanyelo wehlisa ubisi wakhe.
Kuzodingeka zijwayele ukuzungezwa okusha, ukuhogela, iziqukathi zokudla kanye nomsindo.
Ama-piglets angase ahlanganiswe namanye ama-weaners futhi angadingeka ukuthi aqale ukubusa ngokusebenzisa izimpi.
Uma izingulube zeminyaka ehlukene zixutshwe, kuzoba nemithombo emisha yezifo kanye nezifo eziphazamisayo, inselele amasosha omzimba wezingulube zeqembu elincane elingaxhunyiwe ngaphambili.
Umthetho waseNingizimu Afrika udinga ukuthi zonke izilwane kufanele zihlonzwe, okusho ukuthi i-tattoo indlebe ebhalisiwe yezingulube. Inombolo noma ikhodi izofana ne-brand noma tattoo ezinkomeni zomnikazi. Inombolo ikhishwe yi-Theft Unit ye-SAPS futhi idinga ukugcwaliswa ifomu nokukhokha ikhodi. Ihhovisi likaMbuso wezilwane lingasiza.
Izinqubo ezijwayelekile zokugaya zingase zibandakanye ukugoma nokugonywa ngamakhemikhali. Umsila kanye nokuchofoza ama-eyeteeth akudingekile kodwa umjovo wensimbi kufanele unikezwe ngesonto lokuqala lokuphila.
Imithetho esemqoka yomlimi wezingulube mayelana nokunakekelwa kwabancancisi ukuhlinzeka nge "nursery", ehlukile, evikelekile futhi engaphansi komnakekeli, okufanele aqinisekise ukuthi lezi zingulube ezincane zifudumele, zomile, zikhululekile, zihlanzekile futhi zihlanzekile -fakiwe.
Ngenxa yokuthi iphethini lokukhula kanye ne-carcass value valuekhulu.
Wonke ama-miller noma ama-co-op azoba ne-ration ranerer nge-18% kuya ku-20% amaprotheni, ngesidlo noma ifomu le-pellet. Kuzodala kodwa ukutshalwa kwezimali kwezingulube ezincane.
Leli gama lishintshe igama elithi 'fatteners' elidala ngesiNgisi futhi lisetshenziselwa izingulube ezincane ezivela esigabeni sokuncibilika cishe emasontweni angama-10 kuya kwangu-12 ubudala.
Abakhulekeli bafuna okungenani okungenani amaqembu ezinyaka. Ibhizinisi labo ukuthi badle njengoba umlimi angabanika, uma nje kungasetshenziswanga ukungcola, isikhunta noma ipulasitiki. I-protein ye-protein ye-protein engama-16% kufanele ibe isisekelo sohlelo lokudla lwe-piger. Ezinye izimali zingenziwa ngokwengeza ukudla komkhiqizi ngempahla ejwayelekile evela ezinqolobaneni, ama-dairies, ama-canteens kanye nabathengi bemifino. Lokhu kokudla okudlulele okudala kungasetshenziselwa ukwandisa ukudla okulinganisiwe ngaphandle kokwenza okungaphezu kwama-carbohydrate. Ungadli ama-carbohydrate amaningi kakhulu. Amanye amamitha azohlinzeka isengezo njengesengezo esengeziwe esikhethekile.
Ngoba izingulube zizodla cishe noma yini, akusho ukuthi kumele banikezwe inkunkuma ukuze badle. Ukudla kangcono, kungcono izinga lokukhula kanye nokufaka izidumbu